DVD Creator U Apple
1. Guba iPhone video inay DVD
2. Gubashada iPad Mini2 video inay DVD
3. Gubashada iPad video inay DVD
4. Gubashada iPad Air video inay DVD
5. Beddelaan Lugood video inay DVD
> Resource > iPad > Sida loo Guba iPad Air videos in DVD
Dhawaan Apple ayaa bilaabay in ay qalabka category-qeexaya, iPad Air. Iyadoo bandhigay 9.7-inji ileyska, iPad Air users siin doonaa waayo-aragnimo cusub oo lagu qoro videos. Waxaa gabi ahaanba waa qalab la yaab leh si ay u helaan in gacanta. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku gubi iPad Air videos in DVD, si aad u weligiis ilaalin oo dhan xusuus qaali ah. Sidee baad u qabtaan xaaladda noocan oo kale ah?
Waxaad isku dayi kartaa this xirfadeed oo si sahlan loo isticmaalo iPad Air videos in DVD gubi, Wondershare DVD Creator ( DVD Creator for Mac ). Waxa aad joojin doonaa ka werwerayn oo ku saabsan khasaaraha xasuusta. Gubi Tani iPad Air in DVD kuu ogolaanaysaa inaad gubi videos, sawiro iyo Cajalado ku dhawaad ​​qaab kasta.
Tutorial soo socda ayaa kuu sheegi doona sida loo gubi iPad Air videos in DVD ee faahfaahin ah oo ku salaysan nidaamka hawlgalka Windows. Geedi socodka oo dhan waa wax fudud oo fudud. Haddii aad tahay user Mac ah, tallaabooyinka ku dhowaad isku mid ah u noqon doonaa.
1 Import iPad Air videos in DVD gubi
Marka hore waxay u baahan yihiin in aad si ay u gudbiyaan aad video iPad Air si aad u computer via Lugood. Markaas free download iyo rakibi this Videos iPad Air in DVD gubi.
Ka dib markii software ah, fadlan guji "+ Import" button ee bidixda xagga kore ee interface ugu weyn. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi iPad Air videos in software ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad soo dhoofsadaan ka badan hal video, waxaad marka hore dooran kartaa video ah, oo ka dibna riix "kor" iyo badhamada "hoos" si ay ula qabsadaan si video ah.
2 Edit iPad Air videos
Ka dib markii ay soo degida videos, aad si fudud u riixi kartaa edit icon ku videos keeno si ay u saxaa. Waxaad jar karo, ku dar watermark ama Cinwaan in video ah si ay u shakhsiyeeyo.
3 Samee DVD menu ah
Waxaa jira 4 isha sare ee interface ugu weyn ee software-ka. Fadlan guji "Menu" si ay u doortaan qaab ku habboon menu u DVD aad. Waxaa jira in ka badan 40 DVD bedeley kartoon ah oo ma guurto ah. Waxaad dooran kartaa waxa aad jeceshahay. Haddii bedeley ay gundhig ugu software aan adiga kugu haboon. Waxaad kartaa free download foom oo aad jeceshahay adigoo gujinaya batoonka arrow cagaaran ee midigta sare ee interface ugu weyn.
4 Gubashada iPad Air video inay DVD
Marka aad dhamaysid, fadlan guji "Kulanka Xiisaha Leh" tab in ay ku eegaan aad iPad Air videos. Haddii aad ku qanacsan aad video leh, fadlan geliso DVD faaruq iyo dooran "cajalid DVD". Markaas fadlan guji "Guba" tab. Markaasaa waxaa u bilaabi doonaan in ay gubi iPad Air videos in DVD . Waxay u baahan doonaa waqti waxoogaa ah (daqiiqo ilaa saacad ah) iyadoo ku xiran DVD dhererka.
Fiiro gaar ah: Haddii mashruuca DVD aad ka weyn tahay 4.7G iyo aad u lahayn disc DVD9, kaliya geliso disc D5 ah halkii, barnaamijka si toos ah u cadaadin doonaan.
Sida loo Guba Canon videos in DVD
Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Samsung Galaxy S3 in iPad
Sida loo dar Photos in iPad
Tababare iPad Photo: Maamul Photos on Your iPad Well